Ciidanka dowladda oo howlgal miino baaris ah sameeyay - Wardeeq 24 TV Ciidanka dowladda oo howlgal miino baaris ah sameeyay Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Ciidanka dowladda oo howlgal miino baaris ah sameeyay
Ciidanka dowladda oo howlgal miino baaris ah sameeyay
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saacadihii la soo dhaafay waxaa ay howlgallo culus ka sameeyeen Degmada Waajid ee Gobolka Bakool iyo degaano hoostaga.
Saraakiisha howlgalka hoggaamineysay ayaa waxaa ay sheegeen in ujeedkooda uu ahaa xaqiijinta Amniga, isla markaana ay ku guuleysteen inay qarxiyaan miino ay Al-Shabaab ku Aaseen wadada dhinaceeda, si ay ugu dhibaateeyaan Shacabka.
Sidoo kale saraakiisha waxaa ay sheegeen in Ciidamada ay howlgalkooda uu ahaa sidii Al-Shabaab oo mararka qaar weeraro ka fuliya degaano hoostaga degmada Waajid looga saari lahaa, isla markaana ay ku guuleysteen.
Ugu dsmbeyn saraakiishu ma sheegin waxyaabo ay kusoo qaabteen howlvalkaas, hayeeshee waxaa ay sheegeen inay sii wadi doonaan ilaa ay ka xaqiijinayaan amniga degmada Waajid iyo degaannada kale ee hoostaga.
Previous articleFaah faahino kasoo baxaya dagaal ka dhacay gobolka Jubbada Hoose
Next articleFarmaajo iyo Rooble oo maanta kulmaya